लोकेन्द्र भण्डारी लुम्बिनी क्षेत्रका चर्चित भलिबल खेलाडी हुन् । राष्ट्रिय भलिबल खेलाडी तथा ‘लेबल वान कोच’ भण्डारीलाई कोरोना महामारीले यस्तो असहज परिस्थति सिर्जना गरिदियो, आफ्नै गर्भवती पत्नी शोभा र पेटको बच्चा बचाउन भगवान्लाई पुर्कार्दै सहयोगीसामु बिलौना गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
कुरा गत भदौ महिनाको हो । कपिलवस्तुमा भलिबल ‘गेम’ थियो । ‘गेम’ सकेर आउँदा साढे २ वर्षको छोरालाई हनहनी ज्वरो आएको रहेछ । पत्नी शोभालाई पनि ज्वरो ।
उनले मेडिकलमा लगेर चेकजाँच गराए । औषधि खाँदा ज्वरो घट्ने, औषधि छाड्दा आइरहने भयो । छोरालाई ज्वरो निको भयो तर पत्नी शोभालाई खोकी बढ्दै गयो ।
सधैं गर्भ चेकजाँच गराइरहने शिला मेडिकल बुटवलमा लोकेन्द्रले पत्नीलाई पुर्‍याए । एक्सरे गर्दा छाती बढी नै खराब देखियो । स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टरले कोभिडको शंका गरेर पीसीआर जाँच गर्न निर्देशन दिइन् ।
शोभालाई अलि बढी नै गाह्रो भएकाले डाक्टरको निर्देशन बमोजिम ल्याबले २ घण्टामा कोभिड रिपोर्ट दियो । रिपोर्ट पोजेटिभ आयो । अक्सिजनको मात्रा घटेर ५० मा झर्‍यो । छाती खराब देखिएकाले तुरुन्तै आईसीयू शय्यामा भर्ना गर्न लोकेन्द्रलाई चिकित्सकले अह्राए ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा आईसीयू बेड पाइएन । २ दिन आकस्मिक कक्ष (इमरजेन्सी) मा राखियो । शोभालाई सुधार भएन ।
तेस्रो दिन तिलोत्तमास्थित क्रिमसन अस्पतालमा आईसीयू बेड पाइयो, बिरामीलाई त्यहाँ सारियो तर सुधार हुने अवस्था नदेखेपछि डाक्टरले काठमाडौं लैजान सुझाए ।
शोभाको पेटमा ७ महिनाको बच्चा थियो । लोकेन्द्रले हेलिकप्टरमा पत्नीलाई काठमाडौंस्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा बुवासँग पठाए । आफूलाई पनि कोरोना संक्रमण भइसकेको हुँदा हेलिकप्टरले लोकेन्द्रलाई लैजान मानेन ।
त्यतिबेलासम्म समय निकै घर्किसकेको थियो । शोभा बेहोस थिइन् । प्राविधिक रूपमा बुटवलभन्दा सुविधासम्पन्न काठमाडौंका अस्पतालमा गर्भको सन्तान र पत्नीलाई निको होला भन्ने विश्वासमा उनी थिए ।
त्यहाँ लगेपछि शोभाको औषधि चलाउन अपरेसन गरेर बच्चा निकाल्नुपर्ने चिकित्सक बताए । लोकेन्द्र आफू पनि संक्रमित भएर घरमै थिए । बच्चा नलिकाले दुवैको ज्यान खतरामा । अन्ततः ७ महिनाको गर्भबाट अपरेसन गरेर बच्चा (छोरी) निकालियो । बच्चा र आमालाई भेन्टिलेटरमा राखियो ।
शोभाको गुमेको होस फर्किएन । लोकेन्द्र आफूलाई कोभिड निको नहुँदै पत्नीलाई हेर्न भनेर काठमाडौं गए । पत्नी र छोरी देखेपछि भगवान्लाई पुकार्नुबाहेक उनको हातमा केही थिएन ।
दिन बिते, राति बिते छोरी र पत्नी भेन्टिलेटरमै छन् । निको हुने सम्भावना कम छ भनेर चिकित्सकले भनिरहेका छन् । उनी अस्पताल परिसरमा रोएर दिन कटाइरहे ।
यता निको हुने अवस्था कम उता पैसाको चरम अभाव ! अस्पतालमै दैनिक २ लाख रुपैयाँसम्म खर्च उठ्न थाल्यो । घरबाट ऋणधन गरेर ल्याएको पैसा सकियो । हप्ता बित्यो, २ हप्ता बित्यो । शोभा न होसमा आइन्, न स्वास्थ्यमा सुधार हुने केही संकेत देखियो । २० दिन पुग्यो, उनमा सुधार देखिएन ।
डाक्टरले समेत आश मारेका थिए तर २१औं दिनमा चमत्कार जस्तै भयो । शोभाले आँखाका परेला हल्लाइन् । लोकेन्द्रलाई आशा पलायो – पत्नी बाँच्छिन् कि भन्ने ? शोभालाई हेरेको थिए अस्पतालका डाक्टर सन्जिल कृष्ण श्रेष्ठले ।
अस्पतालमा भर्ना गरेको २४औं दिनमा घाँटीबाट ट्यूब राखेर फोक्सोसम्म पाइप जडान गरी श्वासप्रश्वासमा सहजीकरण गरियो तर ज्वरो घटेको थिएन । २६औं दिनमा कोभिड रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । अक्सिजन पनि ‘मेन्टेन’ हुँदै गयो । त्यसको ४ दिनपछि शोभालाई ‘भेन्टिलेटर’बाट आईसीयूमा सारियो । लोकेन्द्रलाई आशा पलायो ।
शोभाको निगरानी बढाइयो । आईसीयूमा सारिए पनि शोभाको होस आएको थिएन । अस्पताल भर्ना गरेको ४० दिनपछि शोभाले केही मात्रामा भए पनि स्मरण गर्न थालिन् । छोरीलाई पनि ३९ दिनपछि भेन्टिलेटरबाट एनआईसीयूमा सारियो ।
उनलाई साथीभाइ, दाजुभाइ र ससुरालीबाट पठाएको सबै पैसा सकियो । अस्पतालको खर्च मात्रै ८३ लाख रुपैयाँ आयो ।
भण्डारीको परिवारलाई बचाऊ भन्दै नेपाल नेसनल भलिबल फ्यान ग्रूपले देश–विदेशमा सहयोग अभियान सञ्चालन गरे । त्यसमा लक्ष्मण काफ्लेले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको लोकेन्द्र सम्झिन्छन् ।
‘म जस्तो खेलाडीले कहाँबाट त्यति पैसा जम्मा गर्नु ? खेलाडी भएर चिनिएकाले धेरै साथीबाट सहयोग उठाउनुभएको रहेछ । सबैको साथ र सहयोगले श्रीमती र छोरीलाई बचाएँ,’ लोकेन्द्र भन्छन् ।
हेलिकप्टरबाट पत्नीलाई काठमाडौं लैजान उनले ४ लाख खर्चिए । उनी भन्छन्, ‘छोरीको दैनिक भेन्टिलेटर खर्च २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भयो । वार्डमा सारेपछि दैनिक ४० हजारसम्म भयो ।’
खर्च जतिसुकै भए पनि लोकेन्द्रले पत्नी र छोरीलाई बचाउन सफल भए । बाँच्ने आशा नै नभएका पत्नी र छोरीलाई ८४ दिनको अस्पताल बसाइपछि भण्डारीले पुसको दोस्रो हप्ता रूपन्देहीको तिलोत्तमा–२ स्थित घरमा ल्याए । अस्पतालमा सबैभन्दा बढी अवधि बस्ने बिरामी शोभा र उनकै छोरी रहेका अस्पतालको रेकर्डमा छ । ‘शोभालाई अझै पूर्ण निको भएको छैन । अहिले पनि दैनिक थेरापी गरिरहनुपर्छ, घरको सिँढी तल–माथि गर्न सक्दिनन्,’ लोकेन्द्रले भने ।
डाक्टर श्रेष्ठले अहिले पनि शोभालाई फोन गरेर स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने गर्छन् । डाक्टर श्रेष्ठलाई लोकेन्द्रले पनि साँच्चै भगवान् मान्छन् ।
३९ वर्षका लोकेन्द्र मणिमुकुन्द भलिबल क्लब र सिद्धार्थ बोर्डिङ स्कूलका ‘कोच’ हुन् । उनको परिवारलाई बचाउन उनले पढाउने र सिकाउने विद्यार्थीहरू पनि जुटेका थिए ।
‘साँच्चै अप्ठ्यारो अवस्थामा वास्तविक साथी चिनिने रहेछन्,’ लोकेन्द्र भन्छन्, ‘सहयोग गर्छाैं भन्नेहरू पछाडि हटे, चिन्दै नचिनेका सहयोगी मनहरू अगाडि बढे । मैले आशै नगरेका श्रीमती र छोरीलाई कोरोनाको मुखबाट फुस्काएर ल्याउन सफल भएँ । अहिले मभन्दा खुशी यो संसारमा कोही होला जस्तै लाग्दैन ।’
असोज ९ गते काठमाडौं गएको भण्डारी परिवार पुस १४ गते फर्किएको हो । ३ महिनापछि बल्ल छोरीको न्वारन गरिएको छ । कोरोनासँग जुध्दै जन्मिएकी छोरीको नाम ‘आशा’ राखिएको छ ।
‘साँच्चै छोरीको नाम पनि आशा जुर्‍यो । उनले केही आशा लिएर जन्मिएकी छन्,’ लोकेन्द्र भन्छन् । आशाले आमाको दूध चुस्न पाइनन् । आशाले भैसी र बट्टाको दूध खान्छिन् ।
लोकेन्द्रको जीवन कोभिड अगाडि पनि सन्तोषजनक थिएन । विवाह गरेको १७ वर्षसम्म पनि सन्तान भएका थिएनन् । उनी सन्तानका लागि कहाँ–कहाँ धाएनन् । बुटवल, भारतको गोरखपुर, पुने, काठमाडौैंको ओम अस्पतालसम्म उपचारका लागि १० वर्ष खर्चिए । कहीँ गए पनि समस्या केही छैन भन्ने तर बच्चा नहुने समस्या जारी रह्यो । अन्ततः उनले अब सन्तान हुँदैनन् भनेर आश मारेका थिए ।
उपचार छाडेको १ वर्षपछि शोभा गर्भवती भइन् । विवाह भएको १८ वर्षपछि छोरा जन्मिए । लोकेन्द्रका साढे २ वर्षका छोरा पनि छन् । अहिले कोभिडसँग जुध्दै छोरी पाएपछि लोकेन्द्रको परिवार हर्षित छ तर सन्तान प्राप्त र कोभिड उपचारको लागि उनको खर्च करोडभन्दा माथि पुग्यो ।
‘सन्तान प्राप्तिका लागि ५० लाखभन्दा बढी खर्च भएको थियो,’ लोकेन्द्र भन्छन्, ‘अहिले फेरि ८३ लाख रुपैयाँ छोरी र श्रीमती बचाउन खर्च भयो । साथीसङ्गीको सहयोगबापत ३० लाख रुपैयाँ उठाए, अरू सबै ऋण खोजेर अस्पतालबाट निस्किए । अब ऋण पार लगाउने चिन्तामा छु । जागिरले त्यतिधेरै ऋण तिर्न सकिने अवस्था छैन ।’
कोरोना संक्रमण फेरि भुसको आगो सरी फैलिएको छ । कुनै दीर्घरोग नभएकी शोभालाई मृत्युको मुखमा पुर्‍याएको कोरोनालाई सामान्य नठान्न लोकेन्द्रले सबैलाई सुझाव दिन्छन् ।